Oxelösund | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Södermanlands län / Oxelösund
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 23 12 2020
Degmada Oxelösund oo dadka degan eey la egyihin 11 500 waxey ku taallaa xeebta badda Östersjön, waxeyna Stockholm uu jirta hal sac. Jewiga badda waxuu ku siinayaa fursado aad ugu wanaagsan in lagu dabaasho, in lagu wado doomaha shiraaca iyo waliba doomaha usha lagu wad.
745 kiilomitir oo laba jibaaran
Norrköping 72 kiilomitir
Katrineholm 73 kiilomitir
Södertälje 81 kiilomitir
Oxelösund waa degmo waxyaabaha kala duwan oo asaasiga ah eey yaalan. Kusoo dhowoow degmada Oxelösund.
Degmada Oxelösund waxaa ku yaal dukaamo, maktabad, good maaweello, xanaanada carruurta oo furan, rug caafimaad iyo farmashiiye.
Degmada Oxelösund waxeey heshiis dhinaca waxbarashada heerka dugsiga sare la leedahay magaalada Nyköping oo eey ku yaallaan dugsiyo sare oo nuuc walba leh.
Campus waa magaca eey wada wadaagaan dugsiyada waxbarasho ee dadka waaweyn ee degmada Oxelösund.
Akhri dheeraad ku saabsan daryeelka bukaanka.
Degmada waxeey xiriir la leedahay Språkservice marka eey dadka u baahanyihiin turjubaan.
Shaqo bixiyayaasha ugu weyn ee degmada waxeey kala yihiin SSAB, shaqaalaha degmada Oxelösund iyo dekadda Oxelösund oo iyadana dad badan shaqaaleeysiisa.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Oxelösund